जनता एमाओवादीलाई जिताउन आतुर छन् – Janaubhar
जनता एमाओवादीलाई जिताउन आतुर छन्
प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक ७, २०७० | 115 Views ||
-[अध्यक्ष प्रचण्ड], एकीकृत नेकपा माओवादी
संविधानसभाको चुनावमा तपाईहरुका मुख्य प्रतिवद्धताहरु के के हुन् ?
संविधानसभा १० वर्षे जनयुद्धको एजेण्डा हो । पहिले पनि हामै्र पहल र संघर्षको बलमा संविधानसभा संभव भएको हो र अहिले पनि यो संविधानसभाको निर्वाचन पनि हामीले ठूलो त्याग गरेपछि मात्रै हुन लागेको हो । यो कुरामा कुनै भ्रम रहनुहुन्न कि हामीले नचाहेको भए वा त्याग नगरेको भए यो संभव थिएन । संविधानसभाको निर्वाचनमा हामीले मुख्य ५ वटा एजेण्डालाई केन्द्रीत गरेका छौं ।
हामीले भनेका छौं लोकतन्त्र समानुपातीक र समावेशी चरित्रको हुनुपर्यो ।
दोश्रो हामीले भनेका छौं की राष्ट्रवाद भनेर जेलाई भनिएको छ, सामन्ती अन्धराष्ट्रवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध सच्चा प्रगतिशील राष्ट्रवाद हुनुपर्यो ।
तेश्रो समतामूलक आर्थिक सम्वृद्धि । गरीवीको खाडल बढेको आर्थिक वृद्धिदरले जनताको हित गर्दैन, मुलुकको हित गर्दैन । सबै जनताको हित हुने र सबैको आर्थिक स्थितिमा सुधारसहितको सामाजीक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि भनेका छौं त्यो भनेको समतामूलक आर्थिक सम्वृद्धि ।
अर्को कुरा पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्यो भनेका छौं ।
र, अर्को कुरा हामीले संघीय गणतन्त्रलाई संथागत गर्ने प्रक्रियामा जादैछौं भने नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति हुनुपर्यो र राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा पाच वर्ष स्थिर र बलियो सरकार चलाएर मुलुकलाई तिब्र आर्थिक विकासमा लैजानुपर्यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा हामीले विशेष गरेर यीनै विषयहरुलाई हाम्रा एजेण्डा र प्रतिवद्धतामा राखेका छौं ।
देशव्यापीरुपमा निर्वाचनको माहौल बन्दै गएको छ तपाई र पार्टीका नेताहरु देश दौडाहामा पनि हुनुहुन्छ, कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाली जनताको महानता देखेर मलाई आत्मविश्वास अझ वढेको छ । कतिपय सन्दर्भमा माथिल्लो वर्गका केही मानिस र मिडियाहरुले जनता निराश छन् भनेर प्रचार गर्ने र भ्रम छर्ने कोशिस पनि गरिरहेका छन् । तर नेपाली जनता उत्साहित छन् ।
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरे लगत्तै म सेती महाकालीमा सिधै गएँ । ती जिल्लामा जनताको उभार आश्चर्यजनक ढंगको देखियो । त्यसकारकाण नेपाली जनता धेरै सचेत छन् । धेरै महान पनि छन् भन्ने अनुभुति मलाई भयो ।
बाजुरा जस्तो विकट जिल्लामा हजारौं मानिसहरु दुई दिनसम्मको बाटो हिडेर सभामा सहभागी हुन आएको देखियो । त्यो आफैंमा एउटा अद्भुत प्रक्रिया हो ।
त्यस्तै अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कंचनपुरमा त्यो उभार देखिसकेपछि मैले भनें जनता धेरै उत्साहित छन् । नेपाली जनता यस पटक संविधान बनाई छाड्ने मुडमा छन् । त्यसका लागि हामीलाई पूर्ण बहुमत दिलाउने कुरामा विश्वस्त पनि छन् ।
जनतामा जाँदा मैले बुझेको के हो भने पार्टीहरुले अलिकति केही कमी त गरे तर अब पार्टीहरु सहमति भनेर बस्ने र संविधान नबनाउने दिशामा जानु हुँदैन । अब दलहरुले त्यो गर्ने छैनन् । हामीले भनिसकेका छौं । ६ महिनापछि भोटिङ प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान बनाइ छाड्छौं, दिन्छौं । यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।
नेपाली जनता संविधान बनाउन जनमत दिने मुडमा भएको देखेको छु मैले । सेती महाकालीको कुरा आज किर्तिपुरमा जनताबाट पाएको प्रतिक्रिया, सुझाव र उत्साहले त्यस कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ । यसमा देखिएको जनताको उत्साह अभुतपूर्व नै भन्नुपर्छ ।
मैले मधेशका जनतामा जुन उत्साह देखेको छु, त्यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालभरकै जनता पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा एमाओवादीलाई पूर्ण बहुमत दिन आतुर छन् । त्यसैले हाम्रो पक्षमा पूर्ण बहुमत आउछ, त्यसमा म विश्वस्त छु । माओवादीको पक्षमा वहुमत आउछ, संविधान बन्छ, स्थिर सरकार बन्छ र देश विकासको मार्गमा अगाडि वढ्छ, यो हाम्रो दृढ विश्वास हो ।
अझै पनि केही मानिसहरु र जनतामा चुनाव हुन्छ की हुन्न भन्नेमा केही आशंकाहरु देखिन्छन् तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अब त्यो संभावना टरिसक्यो । आशंका गर्ने अवधि सकिइसक्यो । किनभने सिंगै देश अब चुनावमा केन्द्रीत भइसक्यो । बाहिर भएका साथीहरुले पनि हामी चुनाव डिस्टर्ब गर्दैनौं भनिसक्नुभएको छ । डिस्टर्ब गर्ने स्थिति पनि छैन । उहाँहरुले त्यसो गर्नुभयो भने उहाँहरु नै जनताबाट अलग थलग पर्ने स्थिति आउँछ ।
चुनावमा कुनै त्यस्तो विद्य्नबाधा हँुदैन । एकाध सानातिना घटना हुन सक्छन् त्यसले निर्वाचन नै अवरोध हुने भन्ने हुँदैन । संसारमा जहिले पनि जहाँ पनि एकाध नकारात्मक घटना त हुन सक्छ् । तर आम रुपमा निर्वाचनमा जनताको जे उत्साह छ, दलहरुको जे प्रतिवद्धता छ र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा जे माहोल बनेको छ ती सबैको योगबाट अब निर्वाचन भाँडिने वा अवरोध हुने संभावना देखिन्न । निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न हुन्छ ।
अर्को कुरा जो साथीहरु बाहिर हुनुहुन्छ मलाई त के लाग्छ भने सेती महाकालीदेखि अन्य स्थानमा समेत पुगेर फर्किदा त लगभग केही केन्द्रीय नेताहरु बाहेक सबै साथीहरु पुरानै घर फर्कीसक्नुभएको छ । अब धेरै बाँकी हुनुहुन्न, उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ भन्नेमै विश्वस्त छु ।
संघीयतासम्वन्धी विषयमा दलहरु पुरानै अडानमा छन् । जसले गर्दा फेरी पनि संघीयतामै कुरा नमिलेर संविधान नबन्ने खतरा त हुदैन ?
संघीयताको विषयमा मतभेद त छ । हिजो गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र उत्पीडितलाई अधिकार दिने कुराको विरोध गर्नेहरु आज पनि पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमै छन् । हिजो संकटकाल लगाएर टाउकाको मुल्य तोक्नेहरु र नेपाली जनतामा दमन गर्नेहरु नै आज परिवर्तनको विरोधमा छन् ।
उनीहरुकै कारण हिजो संविधान बन्न सकेन तर अब भने कसैले रोकेर संविधानको काम रोकिन्न । उनीहरुले केही कुरामा सहमति नजनाए पनि यस पटक संविधान बन्छ । संविधानसभाबाटै यो पटक संविधान बन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी हामीले गरिसकेका छौं ।
पार्टीहरु बीच यस संघीयताको विषयमा कुरा नमिले पनि नेपाली जनताले यसपटक संघीयताको पक्षमा दुई तिहाई मत दिंदैछन् । त्यसकारण एमाले वा कांग्रेसले नमान्दैमा संविधान बन्ने काम रोकिँदैन ।
अर्को कुरा उहाँहरुले पनि एउटा सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ की अब सधैभर सहमति भनेर बसी नरहने र ६ महिनापछि प्रक्रियामा जाने र जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्ने । त्यो भनेको भोटिंग गर्ने भनेको हो । भोटिंगमा गइसकेपछि यसो भनिसकेपछि संविधान बन्ने वा बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नको हल गरिएको छ ।
एमाओवादीको बहुमत आउछ भन्ने विश्वास छ त ?
एकदम पूर्ण आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु एमाओवादीको पक्षमा पूर्ण बहुमत नै आउछ । देशभरका जनताको सदभाव र परिवर्तनका एजेण्डाको पक्षमा देखिएको लहर र उभारले उक्त कुराको संकेत गरिसकेको छ ।
हामीले आम जनतालाई अहिले भनेको कुरा नै त्यही छ कि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको दिशामा बाधा भनेको स्थिर सरकार नहुनु हो । बलियो र बहुमतको सरकार नहुनु हो । त्यसकारण यसपटक नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र आर्थिक समृद्धिका साथै संविधान निर्माणको कामको नेतृत्वका लागि पनि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत दिनुपर्छ, अहिले हाम्रो अपील यही छ ।
यो कुरा आम नेपाली जनताले त्यसमा पनि मजदूर, किसान, उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला उत्पीडित क्षेत्रका जनता त्यसमा पनि विभिन्न जाति, जनजातिले माओवादीलाई पूर्ण बहुमत दिएर मात्रै बलियो सरकार हुन्छ र आर्थिक समृद्धितिर देश जान्छ । अनि संविधान बन्छ, जसवाट हाम्रो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
हामीले बहुमतबाट सरकार बनाइसकेपछि हाम्रो ध्यान एकातिर संविधान निर्माण गर्नेमा हुन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक समृद्धितिर हुन्छ । हामीले उत्पादन, विकास र निर्माणलाई अभियानको रुपमा लैजाने निर्णय गरिसकेका छौं । हाम्रो नेतृत्वको सरकारको मुख्य ध्यान यिनै दुईटा कुरामा केन्द्रित हुन्छ ।
एमाओवादी विरोधीहरुले वेलावखत यहाँलाई तारो बनाउँदै विभिन्न किसिमका झुठ र अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । अहिले पनि सबैतिरबाट यहाँमाथि भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको छ, तर यहाँ स्वयंले भने खासै प्रतिक्रिया दिने गर्नुहुन्न ? राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य केन्द्र तथा एमाओवादीको प्रमुख नेता रहनुभएका यहाँविरुद्ध किन यसरी अर्नगल प्रहार भइरहेको होला ?
यसमा त्यति जटिल र बुझ्न गाह्रो कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । इतिहासका कुनै पनि परिवर्तन, क्रान्ति र रुपान्तरणको क्रममा जनताले आफ्नो वर्गको एउटा नेतृत्व तयार पार्छ । जनताको त्यो नेतृत्वलाई प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले जहिले पनि आँखाको तारो बनाएकै हुन्छन् ।
किनकी जनताले तयार पारेको त्यो नेतृत्वलाई खतम नपारेसम्म र बदनाम नगरेसम्म उनीहरुको वर्गको हित नहुने भएकाले त्यो वर्गका मान्छेहरु एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छन् र जनताले तयार पारेको नेतृत्वलाई जसरी पनि सखाप पार्ने षडयन्त्र गर्छन् । यो सोझो कुरा हो ।
नेपाली जनताले १० बर्षको महान् जनयुद्ध, १९ दिनको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न जनजातिका, महिलाका दलितका, पीछडिएका क्षेत्रका आन्दोलनका बीचबाट एकीकृत नेकपा माओवादीका रुपमा एउटा नेतृत्व तयार पारेको हो । त्यो पार्टीको अध्यक्षका नाताले मैले जनयुद्धको तयारीमा, जनयुद्धको प्रक्रियामा र शान्ति प्रक्रियामा जे भूमिका खेलें जनताले आफ्नो नेतृत्वको रुपमा स्वीकारेको, माया गरेको त प्रष्ट छ । त्यो प्रतिक्रियावादीका लागि असैह्य भएको छ ।
उनीहरु रातदिन प्रचण्डलाई कसरी सिध्याउने भनेर लागिरहेका छन् । अरुलाई गाली गरेर, अरुलाई झुटो कुरा गरेर केही अर्थ हुँदैन, प्रचण्डलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुले राम्रो बुझेका छन् । त्यसकारण कसरी आफ्नो नेतृत्वको रक्षा गर्ने भन्ने जनताको र जनपक्षीय शक्तिहरुको पनि दायित्व हुन्छ ।
जनयुद्धमा उनीहरुले किन हाम्रो टाउकाको मूल्य तोकेका थिए ? त्यतिखेर आफ्नो नेतृत्वलाई बचाउने कतिधेरै जनताले त्याग र बलिदान गर्नुप¥यो ? नेतृत्वलाई सिध्याउन पाए बिरुवा मै निमोठ्न पाइन्थ्यो भन्ने थियो ।
यिनै मान्छेहरु होइनन् टाउको झोलामा ल्याउ पैसा लैजाउ भन्ने ? अहिले विभिन्न मिडियामा जसले हाम्रा विरुद्ध झुठ्ठा र अनर्गल प्रचार गरेका छन्, जसको सिता खाई उसको गीता गाई भने जस्तो त हो । उनीहरुका सिता खाएका मान्छेहरुले त्यही गर्नु पर्छ ।
त्यसकारण म त्यसमा व्यक्तिगतरुपले उत्तेजित हुनुपर्ने, हरेक पटक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन । यो इतिहासको नियम अनुसार क्रान्तिको नियम अनुसार भइरहेको छ । जनताको तागत पुग्यो भने जनताले आफ्नो नेतृत्वको रक्षा गर्छन् । जनताको तागत पुगेन भने प्रतिक्रियावादीले सिध्याइदिन पनि सक्छन् । यो भिन्न रुपमा जनयुद्ध हो ।
माओत्सेतुङले भनेको कुरा म यहाँ सम्झन्छु– युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति रक्तापातहीन युद्ध हो । त्यसकारण हामी अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौं, यो रक्तपातहीन युद्ध नै हो ।
म हाम्रा कार्यकर्ता र जनतामा के भन्न चाहान्छु भने– हिजो युद्धमा हामीलाई सखाप पार्न चाहान्थे, अहिले पनि सखाप पार्न चाहेका छन्, हिजो नेतृत्वको रक्षा गरेर नै अहिले संघीय गणतन्त्रमा हामी आइपुगेका छौं ।
अहिले पनि नेतृत्व रक्षा गरेर जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादतर्फ जाने दायित्व हाम्रो अगाडि छ । मलाई जनताप्रति विश्वास छ, पार्टीका नेता–कार्यकर्ताप्रति विश्वास छ, हामी विजयी हुन्छौं ।
प्रस्तुतिः सन्तोष पौडेल
Prevपहिचानसहितको संघीयता सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली– सुदर्शन
Nextदेश एमाओवादीको एजेण्डामा– सुदर्शन